Dowlada Soomaaliya oo u digniin kulul u jeedisay dowladaha Jabuuti iyo Kenya - Jowhar somali news leader
Home NEWS Dowlada Soomaaliya oo u digniin kulul u jeedisay dowladaha Jabuuti iyo Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horeysay si cad u muujisay in xurguf siyaasadeed kala dhaxeyso dalka Jabuuti, kadib markii Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe oo goordhow la hadlayay warbaahinta qaranka uu digniin u jeediyay dowladaha Jabuuti iyo Kenya.
Wasiir Dubbe ayaa ku eedeeyay wadamadan inay Midowga Afrika ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ku saabsan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war murtiyeedka la filayo in Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ka soo saaraan xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya.
“Urrurada aan xubinta ka nahay, Diblomaasiyiinta Shisheeye iyo Saaxiibada kale ee diblomaasiyadda Soomaaliya kala dhexeyso , waxaan si cad ugu sheegeynaa in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu yahay hay’adda ugu sarreyso ee sharci dejinta dalka, xeerarka ka soo baxana ay yihin go’aanka ugu dambeeya ee Qaanuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xukuumaddana ay tahay hay’adda fulisa xeerarkaas Dastuuriga ah” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Wasiirka Warfaafinta ayaa xusay in dowlada ay Midowga Afrika ka codsatay inuu kaalin ka qaato sidii dalka doorasho uga dhici lahayd.
“Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika waxa ay horaanta todobaadkan ka wada hadleen sidii Midowga Afrika uu kaalin wax ku ool ah uga qaadan lahaa, sidii Soomaaliya ay uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah oo ay u dhan yihiin dhamaan bulshada” ayuu sii raaciyay Wasiir Dubbe.
Dowlada Federalka ayaa u muuqata in ay culeys siyaasadeed kala kulmeyso Midowga Afrika iyadoo maanta golaha ammaanka midowga Afrika uu ka shirayo arrimo la xiriira doorashada dalka Soomaaliya.
Next articleRW Rooble: “Baaritaan Deg-deg ayaa lagu sameynayaa falkii ka dhacay Garoonka Aadan cadde”